Location: Mbido » Ịdee » Editorial » Njem na njem nlegharị anya: Ọ nweghị mkpa n'oge COVID-19?
30 min gụọ
Foto sitere n'ikike nke Alexandra_Koch sitere na Pixabay
Njem nlegharị anya na-egosipụta ọha mmadụ na-emepụta ya: ngwugwu dị ọnụ ala na-arata ndị njem nlegharị anya 'dị ọnụ ala' - ebe ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-abịa, agaraghị anabata ndị ọbịa. Imepe ebe ndị ọzọ na ime ka ha nwee ọnụ ahịa maka ndị njem ọzọ bụ ihe mgbaru ọsọ a na-atụ anya ya ruo taa. Enweela nkwado ọ bụla maka ịnye ọnụahịa ụgbọ elu maka ihe na-erughị ụgwọ ọdụ ụgbọ elu? - Ọ baghị uru ikwu na a na-ejide anyị na usoro nke mgbalị ụgha iji mee ka njem nlegharị anya dị ka 'ọchịchị onye kwuo uche', nke pụtara ọnụ ahịa maka onye ọ bụla - aberration nke ochichi onye kwuo uche ya na-ebelata ka ọ bụrụ nkwụsị ọnụahịa.
Kedu onye na-eche na ụdị 'ego' echiche chọrọ ụtụ ya, dị ka flashback na-egosi: Mass Tourism na-emeri ma na-ekpebi ndụ obodo na omenala, ma ụgwọ ikpeazụ dị elu: Mmetụta ọjọọ karịrị mmetụta dị mma, ebe njem na-aghọta nke ọma. ihe onyonyo a na-esi n'ihe ọjọọ na-akawanye njọ. 'Overturism' bụ okwu na-akparị mgbari nri anyị, ma ndị ọbịa ma ndị ọbịa. Ndị a na-ahọrọ ịga ebe ọzọ, na-ahapụ 'ebe ndị furu efu'. N'ikpeazụ, ndị obodo nwere ike ịtụgharị uche maka mkpọmkpọ ebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ede akwụkwọ. N'ikpeazụ, ọrịa ha nwere ike kpalie echiche nke ndị ọbịa nwere uche na nhụsianya.
Mgbalị iji kwalite njem nlegharị anya site na nkwalite (cross-) imekọ ihe ọnụ n'ihe gbasara ịkwalite ihe nketa omenala na ụkpụrụ ụlọ na-enwekarị obere obi. Nkwagide na-abịa na mkpịsị ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ naanị ọrụ egbugbere ọnụ, n'oge ọ chọrọ atụmatụ siri ike, ime ihe na-emekọ ihe ọnụ, yana nghọta na nkwado na-efu ego.
N'agbanyeghị ọtụtụ mbọ a na-agba iji wusie ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke njem na njem nlegharị anya, anyị enwetabeghị ọkwa ndị ọgbọ na ndị ọgbọ nwere ụlọ ọrụ siri ike dị ka ụgbọ ala, igwe ma ọ bụ ike - ọ bụghị ịkọwa mgbagwoju anya nke ụdị eco-dị iche iche iji gosipụta. otu ihe ahụ: ntinye nke gburugburu ebe obibi na ebe njem anyị. Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya kewapụrụ nke ukwuu, dị iche iche bụ ọdịmma anyị, ihe ndị anyị na-ebute ụzọ na itinye aka na atumatu kwa ụbọchị.
Ihe fọdụrụ bụ enyo na-adịte aka na n'agbanyeghị mbọ siri ike nke onye ọ bụla n'otu n'otu iji mejuputa njirisi nkwado na n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị na-adịgide adịgide na ọchịchọ nke ọtụtụ ndị ọkachamara kwupụtara, ntakịrị ihe gbasara obodo na-adị ka ọ bụ naanị ole na ole ka e nwetara n'oge.
Njem nlegharị anya na ile ọbịa - ngalaba nke megidere nsogbu niile ka achọpụtara na ọ na-agbanwe agbanwe na mmekọrịta ọha na eze, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi, na-eche ihu ugbu a, n'ihi ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, eziokwu dị ilu nke adịghị ike ya ma kwupụta enweghị mkpa usoro. Lee ihe na-akpali iche echiche si na ya pụta!
Anyị nwere nsogbu nhazi, echiche egbochiri, adịghị ike mkpali, echiche dị ukwuu ma ọ nweghị atụmatụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ ọtụtụ ihe na-enweghị isi n'imeso mmanya na-egbu egbu na-egbu egbu, gụnyere ọrịa na-efe efe, mgbanwe ihu igwe, mgbanwe nhazi, mgbanwe ike, Europe. njikọ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị extremism, demografija na ndị gbara ọsọ ndụ? - Ma ọ bụ ọ bụ naanị ụkọ nkwukọrịta? N'ezie, nke a ga-akọ akụkọ nke ya gbasara afọ mgbasa ozi ịntanetị anyị na ọtụtụ ọrụ.
Ebe ọ bụ na Covid-19 etinyela iwu siri ike na ọha mmadụ, nzuko gọọmentị mebere na mpaghara azụmaahịa egosila na ha na-arụsi ọrụ ike ịchọta ụzọ teknụzụ iji kwalite post-COVID Tourism. Ọ bụ eziokwu: Tupu ọrịa a na-efe efe, enwere ọtụtụ ihe omume kachasị elu nwere ọnụnọ anụ ahụ: nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọgbakọ na tebụl ndị a ma ama - yana ụlọ ọrụ udo nke ụwa na ndị otu ya a ma ama na-anọghị, n'agbanyeghị. Ma ugbu a, na nnukwu ọkwa mmekọrịta ọha na eze nke COVID-19, dabara na ọdachi mgbanwe ihu igwe na-akpata na mmetụta ha kacha njọ na ndị mmadụ na akụrụngwa - enwere ihe dị iche? Ọ dị nwute na ịhụta njem & njem nlegharị anya ekpughere ya ọzọ, furu efu na ịnọpụ iche, kpọchie ya - wee kụpụ ya n'ọkwa na ọbụna iyi ọha egwu mba ụwa n'oge ụbọchị ya enweghị ike imezu ya.
Ka ọ dị ugbu a, oge ọkọchị bịara, akụkụ ọnọdụ okpomọkụ bilitere, na akụkụ COVID-omume dara. A tọhapụrụ olileanya zuru oke nke mgbake na ntụrụndụ iji meghee ụzọ maka atụmanya ka mma, na ihe ndị ọzọ: maka nghọta na-arịwanye elu na, nke mbụ, enwere mmetụta dị nta nke mkpesa gọọmentị, ma ọ bụrụ na ndị mmadụ achọghị ma ọ bụ aghọtaghị echiche ha; nke abụọ, Njem & Njem Nleta ekwesịghị ịchọ ịlaghachi na mbụ.Ọnọdụ COVID, ọ bụrụgodị na ọ dị gị ka ọ̀ na-adịchaghị echeta oge 'ochie' nke ọma.
Emeela ọtụtụ - enweghị mmeri, n'agbanyeghị
Ka o sina dị, a ghaghị inwe ihe dị na ya: N'ịbụ onye haziri ọtụtụ atụmatụ njem nlegharị anya n'ime afọ iri atọ gara aga na karịa, anyị nwere obi ụtọ na anyị so na ndị 'ọsụ ụzọ' ndị 'meghere ọnụ ụzọ':
Anyị egosila oke ọchịchọ anyị na ntinye aka anyị ijikọ ọnụ wulite ma na-eme njem nlegharị anya Sustainable, nke edobere n'ụkpụrụ azụmaahịa yana ụkpụrụ gọọmentị. Anyị emeela ọtụtụ ihe iji mepụta akụrụngwa njem nlegharị anya na imelite teknụzụ nkwukọrịta, kwalite ọrụ na ịkwalite njem njem, kwalite ogige na akụrụngwa osimiri, ịzụ ndị njikwa na ndị ọrụ, na ịchọpụta egwuregwu ọhụrụ na ohere ntụrụndụ.
N'ikpeazụ, na nrube isi n'iwu gọọmentị iji luso COVID ọgụ, anyị nọ na-ekiri mmelite mmachi ntinye yana ihe achọrọ maka ịdị ọcha na nchekwa. Anyị na-agba ọsọ ngwa ngwa iji kpochapụ ebe anyị, akụrụngwa na ọnọdụ ọrụ anyị iji chebe ndị ọrụ na ndị ahịa n'otu aka ahụ site na ọrịa ahụ, anyị na-emezikwa ngwa ọrụ teknụzụ anyị iji chekwaa ume ma mepụta obere ihe mkpofu.
Anyị amalitelarị ịhazi usoro ọhụrụ n'ihi Covid-19, dị ka ịpụ n'oge ezumike ezumike kwa afọ, ịkwalite njem nkeji ikpeazụ na ịnabata ndị otu 'pod Travel' (nke ndị enyi nwere mmasị), ịnakwere ntinye akwụkwọ obere oge. iji nwalee ebe ndị nwere ike ịrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ ('ụlọ-ụlọ ọrụ na anyanwụ'), na-enye ngwugwu njem 'ngwakọ' iji jikọta ezigbo ihe omume dijitalụ maka ọrụ & ebumnuche ezumike ('ọrụ'), ịmepụta ndepụta ịwụ njem na 'homey' ulo. Mgbalị anyị abụrụla nke dị adị, mgbe ụfọdụ ọbụna nka, ma bụrụkwa ihe arụrụ arụ!
Gịnị kpatara na anyị enweghị ike imeri n'ọha gọọmentị ma ọ bụ ndị na-abụghị nke ọha? Iji anya na-ekere òkè na nkwonkwo mkpebi iwere bụghị naanị maka Tourism, ma anyị niile, ebe ọ bụ na anyị niile na-emetụta? Kedu ihe kpatara na ndị isi na ndị njikwa njem nlegharị anya enweghị ike ime ka ebe aga na-enwu dị ka akụkụ dị mkpa nke 'njikwa ebe'? Kedu ihe kpatara na njem na njem nlegharị anya, ewezuga ịbụ ụlọ ọrụ, a na-amatabeghị dị ka ihe hakọrọ na ngwa nzikọrịta ozi nke nwere ike ịkwalite aha obodo, mpaghara, ma ọ bụ obodo n'ozuzu ya? - Kedu ihe kpatara na ndị ndu nwere nghọta, ndị njikwa na ndị otu na njem na njem nlegharị anya anaghị achịkọta ndị njem nlegharị anya niile na ndị ọrụ ile ọbịa ka ha tie mkpu iwe ha gbasara 'enweghị mkpa usoro' ịkpa oke nke ukwuu na ngosipụta dị egwu nye oche gọọmentị na ndị omeiwu?
Maka njem na njem nlegharị anya ọ bụ ihe nkiri, mana oku ịkpọte kwa. Ọ na-arịọsi ike maka ọrụ nkekọrịta anyị na ọrụ ndị na-esote n'ime usoro mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba siri ike nke ebe njem.
Maka ndị obodo ọ bụ ebe ha - 'obodo' ha, ma ọ bụrụ obodo, mpaghara ma ọ bụ obodo, maka ndị ọbịa ọ bụ 'ebe ha ga-aga', na-enwekarị atụmanya na nghọta dị iche iche. Agbanyeghị, njikọ na ebumnuche bụ (w) akụkụ zuru oke iji mepụta njirimara 'ụlọọrụ', ma ọ bụ 'àgwà' nke ebe njem dị ka 'usoro': ebe obibi, ọrụ, itinye ego na njem.
Amamihe ụlọọrụ dabere na nghọta zuru oke n'ime sistemụ, ma ọ bụ ebe ebe ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Nke a pụtara na ngụkọta arụmọrụ ya dị ka otu unit bụ ihe dị mma karịa naanị nchikota nke ihe onye ọ bụla rụpụtara site n'aka ndị otu (= ụgbọ ala karịrị ngụkọta nke akụkụ ya). Usoro a bara uru n'ime usoro ahụ. N'èzí usoro ahụ, Otú ọ dị, sịnụ, n'ihi ọdịbendị dịgasị iche iche nke mpaghara dum, ọ na-aga n'ụzọ ọzọ: Akụkụ dị iche iche nke mpaghara a dị mkpa na arụmọrụ ha karịa dum.
Nke a na-akọwa n'ụzọ dị mfe a mmepe anyị na-aghọta dị ka a mgbagwoju anya: E mesịa, ụmụ mmadụ na-diverging na abụọ ntụziaka: n'otu aka ahụ, ka uru nke a ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma ịrụ ọrụ nke ọma, ọ na-eche n'ebe a zuru ụwa ọnụ Ọdịdị nke nkwurịta okwu netwọk (nke ambiguous ' obodo zuru ụwa ọnụ'), n'aka nke ọzọ, na-agbachitere njirimara onye ọ bụla, ihe a na-eme na-aga n'akụkụ obere omenala ndị na-agaghị agọnahụ ọdịiche ha.
Omume a na-emetụta ike ahịa na nkwalite anyị. Ihe ịma aka bụ ka ịgbanwee site na linear gaa na usoro mgbagwoju anya, nke yiri mgbanwe site na analogous gaa na usoro njikwa dijitalụ. Banyere njikwa ndị ọbịa, ọ bụ maka ịkwatu ọnụọgụ nhọrọ nke ndị ọbịa nwere ike, dị iche iche, iji nweta otu ndị akọwapụtara akọwapụtara nke ọma, ezubere iche maka ụdị ndụ, ọrụ, ọnọdụ, ọnọdụ, klaasị, omume, ịkọ amụma, afọ, mmekọahụ, wdg. Nke a na-achọ ka iche na iche iche ọkọnọ anyị, n'ihi na ịhazi ndị ahịa-ahaziri njem nlegharị anya na-eme na-eme a ọzọ ahaziri obibia anyị nwere ike ọbịa.
N'ime ime nke a, anyị kwesịrị ịma n'ezie ụdị ndị anyị na-achọghị ịnata, ma karịa, ụdị ndị ọbịa anyị ga-ahọrọ ịnabata, dịka ha kwesịrị ime nke ọma maka onyinye anyị - na nke anyị. echiche nke onwe - dị ka ndị ọbịa anyị họọrọ ime ka ha nwee obi ụtọ, laghachi azụ ọzọ, nọrọ ogologo oge, ma kwado anyị dị ka ndị ọbịa nwere mmasị. Enwere echiche na-abịa, ikwubiga okwu ókè dị ka ọ nwere ike ịdị, ma na-atụ aro n'onwe ya - echiche nke àgwà anyị na-emekarị ịhọrọ ndị nwe ụlọ ogologo oge.
Onye ọbịa n'otu n'otu - Ọbịa anyị
N'oge ọgba aghara, ihe 'otu onye' pụtara nwere ike gbanwee nke nta nke nta, site na 'mmadụ' nke a na-enyo enyo gaa na ezigbo mmekọrịta ndị ọgbọ na ndị ọgbọ n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu.
Njem na njem nlegharị anya dịka azụmahịa ọrụ gbadoro ụkwụ na ntụkwasị obi nke ndị otu na ntụkwasị obi. Ka a na-emezu ihe ndị a ka mma, ka mmekọrịta na-enye ọṅụ ga-esiwanye ike ma na-arụ ọrụ 'ile ọbịa' ka mma.
Dị ka Travel & Tourism isi-stakeholders anyị ga-eme ka nkwonkwo mgbalị na-re-ebute ọzọ okwu, n'usoro nke àgwà (vs. quantity), ọmịiko (vs. egotism), ịkwa akwa-mere (vs. akpụ-nchikota ngwugwu), ahaziri ọbịa ọbịa. -management (vs. mass-tourism channeling), lekwasịrị-otu ndị a na-achọsi ike n'ezie ma na-agwa ya okwu, ya mere (vs. 'onye ọ bụla na-anabata'), cross-mmekọrịta (cross-sector, cross-industry), ịdị ọcha (mgbochi mkpofu ego). Atumatu na njikwa mkpofu), nchekwa na nchekwa (iwu na atumatu echekwara / nchekwa, gburugburu ebe nchekwa na ahụike), ọrụ kwalitere ọnụ ahịa ego - yana echiche dị iche iche nke ike na ngagharị - n'ebe ike mmeghari ohuru na e-... njem.
A na-ekpebi ma na-akpọ ndị ọbịa ka mma concretized na ahaziri onwe ha, ka nlọghachi nke itinye ego na-akwụghachi ụgwọ, otú ahụ ka ọ na-atọkwu ụtọ n'izugbe na ebe ahụ, na ebe ahụ dị jụụ karị.
Nhọrọ atụmatụ iji tụọ ihe ịga nke ọma
Ihe na-akpasu iwe bụ ụzọ anyị si atụta ihe ịga nke ọma n'ahịa na njem nlegharị anya: Ọtụtụ mgbe, a na-ekpebi ọrụ akụ na ụba anyị site na ọnụọgụ ọnụọgụgụ dị ka ọnụọgụ ndị bịara njem nlegharị anya na abalị, kama site na sistemụ na-egosipụta njirimara ngwaahịa na ọrụ ọrụ. . Ndị a n'ezie bụ ndị na-ekpebi quantifiable ịga nke ọma. Ebe ọ bụ na ọ dị mfe ijikwa, anyị ka na-ekwe ka ọnụ ọgụgụ akụ na ụba karịa nke oke akụ na ụba. Ọ bụ ezie na imekọ ihe ọnụ ọbụna n'ime ngalaba njem nlegharị anya ka na-ahapụ ọtụtụ ihe a chọrọ, a na-alụ asọmpi maka ọnụahịa ahụ, karịa 'ịka mma'.
Omume a abụrụla ihe jọgburu onwe ya n'ịdị mma ngwaahịa na ọrụ, wee bụrụ nke na-egbu egbu n'ụzọ akụ na ụba n'ọtụtụ ọnọdụ, na-ejighị Covid-19 mee ihe dị ka ewu.
Uto nke ịdịmma pụtara n'ezie ịga 'usoro', iji kwalite ngwaahịa, ọrụ na nzikọrịta ozi, ka ọ dị iche iche n'ime ọpụrụiche a họọrọ, na-elekwasị anya na uru nke ndị ahịa. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ahịa (!) - ọ bụghị naanị afọ ojuju - nke ahụ bara uru mgbalị a na-eme iji nweta uru ogologo oge na iru nkwado. Ịmata na ikpebi otu anyị lekwasịrị anya pụrụ iche na nsogbu na mkpa ha ga-abụ isi, tupu nyochaa (na-agbanyeghị nke a na-ebute ụzọ) ike, adịghị ike, ohere na ihe iyi egwu (SWOT) nke ngwaahịa njem anyị.
Isi okwu bụ 'ọpụrụiche' dị ka usoro okike na-egosi anyị, nke ndị ọrụ ụbụrụ nwere ọgụgụ isi siri nweta echiche na-adọrọ adọrọ iji jikwaa mgbagwoju anya ọtụtụ iri afọ gara aga:
Enwere, dịka ọmụmaatụ, Paul R. Niven, Onye nchoputa na Onye isi oche Senalosa Group, Inc., onye na-ahụ maka njikwa ọkachamara na usoro mmebe atụmatụ. Niven tụbara 'Balanced Scorecard', ngwá ọrụ Robert Kaplan na David Norton mepụtara na 1990s, iji tụọ ọganihu azụmahịa na ọha na eze/NGO na mpaghara anọ dị iche iche: ndị ahịa, usoro ime ụlọ, mmụta na uto nke onye ọrụ, na ego.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge, Frederic Vester, onye na-ahụ maka biochemist na ọkachamara n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi, nwere oke n'ịmepụta ngwa ọrụ nlekọta na atụmatụ maka usoro mgbagwoju anya, 'Nleba anya Prof. Vester'. N'ihe nlereanya ya, Vester na-agbachitere nkwado dị ka ikike nke usoro 'mmadụ mere' iji ihe atụ nke okike nke nhazi onwe ya na mgbanwe, iji mee ka ọ dị mma: Kama ịdabere na usoro nhazi 'linear' nke omenala iji dozie nsogbu ndị dị iche iche. Vester na-edobe nleba anya nke usoro ahụ: Nyocha ya banyere nsogbu ahụ na-emetụta "Nkà nke Echiche Njikọta": nbanye na ntinye nke akụkụ ndụ ndị ọzọ nke jikọtara ya na usoro a na-enyocha ya, site n'izere ka efunahụ ya na nkọwa zuru oke, na iji ya. kama ọnụ ọgụgụ doro anya nke ihe na-achọpụta. Vester na-enye ihe karịrị naanị ohere 'iche echiche', a tiori na-ekpochapụ a ohere n'etiti 'n'ụzọ zuru ezu ziri ezi' na 'kpamkpam na-ezighị ezi' - "iji kpomkwem enwetaghị na-abụghị kpọmkwem ụkpụrụ" (mgbe ọkà mmụta sayensị Lotfi Zadeh).
Dabere na ụkpụrụ nke bayoloji na ozizi evolushọn, karịsịa na iwu okike maka iji ike kacha arụ ọrụ nke ọma, Wolfgang Mewes tọrọ ntọala 'shortfall concentrated strategy' (EKS Engpasskonzentrierte Strategie) wee kọwapụta ụkpụrụ anọ ya:
Tinye uche na akụrụngwa ma wusie akụ ike
Gbanyụọ mkpirisi mkpirisi ma ọ bụ ọkpọ
Mee ka uru ndị ahịa butere ụzọ karịa uru nke onwe ya
Wepụta ihe ndị a na-apụghị ịhụ anya/na-abụghị ihe mbụ karịa ihe a na-ahụ anya/ihe onwunwe.
Itinye 'atụmatụ mkpirisi mkpirisi mkpirisi' gụnyere akụkụ atọ nke ịlele ọganiihu azụmaahịa 'ụzọ ọzọ':
Atụmatụ mkpirisi mkpirisi (ma ọ bụ obere ọkpọ) na-arụ ọrụ dị ka 'scout' a pụrụ ịdabere na ya iji nweta nsonaazụ kacha mma, n'ihe gbasara ọpụrụiche na njirimara ngwaahịa na ọrụ niche. Niche ndị a nwere ike ịdị ntakịrị, mana ha na-akwụghachi ụgwọ karịa ma ọ bụrụ na a na-agwa ya okwu na ahịa. Ka 'kawara', ma ọ bụ lekwasịrị anya ọpụrụiche ahọpụtara bụ, na mbụ atụmatụ a nwere ike ibuli ebe njem nlegharị anya na onye isi ahịa na ịnọpụ iche.
Iji bulite ozi a raara nye mmepe njem nlegharị anya na-adigide yana, yana ọnụ ọgụgụ isi data pere mpe, nweta atụmatụ azụmaahịa pụrụiche (UMP) siri ike maka ndị ahịa, a na-atụ aro atụmatụ a maka ọrụ ọrụ ogologo oge. Anyị kwesịrị iburu n'uche ịghọ - ma nọgide - ụlọ ọrụ njem nlegharị anya kacha mma na-edozi nsogbu ma ọ bụ Destination Management Organisation (DMO) - ọ bụghị maka onye ọ bụla, kama maka ụfọdụ ndị echere nlezianya họrọ nke ọma.
Kama ịgbakọ naanị ihe dị iche iche nke ọrụ anyị yana oke uru iji chịkọta ngwugwu njem, ọ ka mma ịme ngụkọ anyị 'usoro', ma ọ bụ 'dị ike', dabere na atụmanya ebumnuche-otu mmetụta na-ebelata ọnụ ahịa. Kama agụkọ ọnụ ahịa n'otu onyinye gbakwunyere uru, a ga-achọpụta ihe ndị otu ebumnuche na njikere ha nwere ịkwụ ụgwọ, usoro dabara adaba na-esochi iji mebie ọkwa ọnụahịa echere. Ngụkọta usoro kwesịrị ịgụnye ihe ọhụrụ mgbe niile, nke ewepụtara ya kwesịrị itinyeghachi ego. A ga-eme usoro abụọ: nke mbụ, iji kwalite arụmọrụ gbasara ihe ọhụrụ kachasị dị irè, iji kpalite mmeghachi omume n'agbụ; nke abuo, imata njikere-otu dị njikere ịkwụ ụgwọ, na itule ego mgbakwunye na ego ha ga-enweta. Ebumnuche nke ngụkọ usoro bụ imeziwanye uru ndị ahịa ngwa ngwa karịa ndị asọmpi na-eme.
Akara ziri ezi na-elekwasị anya na ntinye nke akụ na-abụghị nke a na-ahụ anya na akụ ụlọ ọrụ na-ahụ anya na ego. Ọgba aghara ndị dị mkpa ka a ga-atụ anya ya. Ọnụ ọgụgụ ziri ezi dabere na ihe ọhụrụ abụọ: nke mbụ, nchoputa onye chemist Justus von Liebig na iwu evolushọn nke usoro ndụ. A naghị ekpebi mmepe ha site n'otu ihe - dịka akụ ego - mana site na ihe kachasị ụkọ, nke a na-akpọ 'ihe kacha nta'; nke abụọ, ihe ịma aka na-ahụ maka njikwa bụ ịchọpụta ihe kacha nta ma mee ihe kwekọrọ na ya, na-amara na akụ ndị na-abụghị nke a na-ahụ anya na-arụ ọrụ dị mkpa. Na ime nke a, ike niile nwere ike itinye uche na nke kacha nta, iji chọpụta ihe ndị ahịa na-ebute ụzọ ma ọ bụ dozie isi nsogbu ha, nke n'aka nke ya ga-edozi obere nsogbu ndị metụtara. Akara ziri ezi na-akwado mgbanwe site na linear gaa n'echiche zuru oke na ime ihe.
O yiri ka ọ siri ike ikpebi usoro ịhọrọ, ha nwere ọtụtụ ihe jikọrọ. Isi ihe ha na-emekarị bụ inye aka ijikwa usoro mgbagwoju anya: Ha niile raara onwe ha nye iji nweta ngwọta kachasị mma maka nsogbu - ma ọ bụ nsogbu - nke na-arịwanye elu nke mgbagwoju anya ga-edobe na ngwaahịa, na-akpọ ndị isi na ndị na-eme ihe ike ime mkpebi ziri ezi na gburugburu ebe obibi na-amasị. ihe gbasara nke puru omume. Dị ka ezigbo nkwado na-amalite n'ókè nke ike, mmalite nke ya niile, ndị kasị nta lekwasịrị anya otu ga-achọta na isi mmalite - onye n'otu n'otu, mmadụ. Covid-19 na mgbanwe ihu igwe na-emetụta anyị niile, a chọrọ onye ọ bụla n'ime anyị ime ike anyị niile iji gbochie ma ọ bụ nwee mmetụta ọdachi ndị a nwere ike ibute. N'ime nke a, onye ọ bụla n'ime anyị - ma dịka ndị ọbịa na ndị ọbịa - kwesịrị nlebara anya na nkwado otu. Nke a na-ahụ maka njem na njem nlegharị anya na okwukwe ya dị elu chọrọ site n'àgwà pụrụ iche nke ile ọbịa a na-akwụ ụgwọ.
Nhazi nke njem nlegharị anya nwere ike bụrụ ihe ngosi maka mgbagha nke enwere ike ikpebi naanị dị ka 'ifuzzy': A na-ewere ya dị ka ụlọ ọrụ na-emepụta uru agbakwunyere na ịkpata ego, Njem na njem nlegharị anya bụ onyinyo nke usoro mmekọrịta akụ na ụba na gburugburu ebe obibi ya. N'ịbụ ndị e weere dị ka 'usoro nzikọrịta ozi' iji kwalite aha ebe a na-aga, njem nlegharị anya kwesịrị inwe amamihe na bọọlụ site n'aka ndị isi ya, iji kwado ma ihe ndị a chọrọ na omenala nnabata nke azụmahịa ya na echiche nke ọrụ na ibi ndụ ha: iji wulite ma jikwaa njem na njem nlegharị anya Sustainable.
Isi ihe ndị a ga-enweta n'ụkwụ siri ike ka ọrịa ahụ gachara
Chọpụta egwuregwu ọhụrụ na ohere ntụrụndụ;
Wepụ site na oge ezumike ruo n'oge ezumike nke afọ;
Mee njem nke nkeji ikpeazụ wee nabata otu 'pod Travel' (otu ndị enyi);
Nabata ntinye akwụkwọ obere oge, ezubere iji nwalee ebe ndị nwere ike ịrụ ọrụ;
Na-enye ngwungwu njem 'ngwakọ' na-ejikọta ihe omume n'ezie na dijitalụ maka ijikọ ọrụ & ebumnuche ezumike;
Mepụta ndepụta ịwụ ị ga-aga na ebe obibi 'homey'.
Ọkara/ Ogologo Ogologo:
wulite njem nlegharị anya na-adịgide adịgide, na-anọdụ ala na ntuziaka azụmaahịa na nkwupụta ozi;
Melite ọrụ ma kwalite usoro njem;
Na-azụ ndị njikwa na ndị ọrụ na-aga n'ihu;
Mepụta akụrụngwa njem nlegharị anya, kwalite akụrụngwa teknụzụ, tinye ike maka ume ọhụrụ, ma belata rọba na ihe mkpofu ndị ọzọ;
Lezienụ anya na megatrends ọhụrụ, dị ka:
– Ndị ahịa' 'ọchịchọ ọhụrụ maka mkpakọrịta', obodo, ọdịdị na omenala;
- nkwalite njikọ, 'neo-ecology' na mgbanwe nke okike;
– Gbanwee site na 'ndi ọbịa' ka ọ bụrụ 'ndị njikwa resonance';
- Nweta nkwalite e-nkwukọrịta na ngwa 'eziokwu agbakwunyere';
Lelee ma usoro ndị a ma ọ bụ na ọ bụghị…
- kwesịrị mgbalị ahụ, ma ọ bụ kama ọ dị ka obere ihe karịa ọnọdụ ejiji oge,
- gụnyere ezigbo uru ma ọ bụ naanị echere agbakwunyere,
- dakọtara na ụkpụrụ ile ọbịa egosipụtara;
… ma were nkwubi okwu n'otu n'otu.
Ọzọ na: Tourism | onye | Ile ọbịa | Management | Organization | nkwado | Marketing
Mmeri dị egwu megide ojoro timeshare na Costa del Sol, Spain Marketing|
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ nke Marble Falls Ile ọbịa|
Ile ọbịa onye Management Marketing Organization nkwado Tourism
Minista Jamaica kpọrọ oku maka arụmụka zuru oke na njem nlegharị anya…